Tanora · Avrily, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Avrily, 2012
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Avrily, 2012
Afrika Mainty30 Avrily 2012
Taorian'ny nijereny lahatsary iray novokarin'i MamaHope manasongadina ankizilahy kely iray 9 taona mitantara sarimihetsika "commando" dia nanatona an'i MamaHope ny tovolahy 7 avy ao Kenya mba hizara izay fomba fijerin-dry zareo ny saimihetsika vokarina avy any Hollywood : ho azy ireto, dia ny fitsaratsaram-poana entin'ireo horonantsary maneho an'ireo lehilahy mainty...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana29 Avrily 2012
Amerika Latina27 Avrily 2012
Ny Hetsika fanadihadiana an-dahatsarin'ny VJ mitondra ny lohateny hoe Mpitsoa-ponenana mitodika amin'ny asa Fivarotan-tena ao Ekoatora dia mijery ny zavatra iainan'ireo vehivavy Kolombiana maro tsy maintsy niampita sisintany ka nifindra monina any Ekoatora noho ny herisetra. Aminà tranga maro, noho ny tsy fahafahany mahazo asa ara-dalàna, mba hahafahana mivelona dia...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Avrily 2012
Tonizia: Eny An-dalambe Ny Mpamaky Boky!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Avrily 2012
Taorian'ny herinandro vitsivitsy nisian'ny fihetsiketsehana tao Tunis, nambara indray ny fisiana hetsika vaovao, antsoina hoe "L'avenue ta9ra", na "Mamaky [boky] ny Lalambe". Antsoina amin'izany ny Toniziana hitondra ny bokiny ho eny amin'ny Lalambe Habib Bourguiba, toerana ahafantarana indrindra ny renivohitra, sy handraisana anjara amin'ny fiarahana mamaky boky.
Arzantina: “Tsy Matoky Ny Sekoly Aho Fa Mino ny Soa Azo Avy Amin'ny Fanabeazana”
Amerika Latina14 Avrily 2012
Namoaka ny voalohany indrindra amin'ny andian-dahatsary manindry letam-pahefana ny rafi-pampianarana mahazatra mitondra ny lohateny hoe Tsy matoky ny sekoly aho fa mino ny soa azo avy amin'ny fanabeazana ny Educación Viva (Miaina ny Fanabeazana). Ao amin'ny lahatsary ahitana dika an-tsoratra no ahitana lahy sy vavy mihoatra ny 20 miantsa an-tononkalo...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Avrily 2012
Lahatsary: Fandripaham-behivavy Sy Kilongavavy Any Shina Sy India
Azia Atsimo05 Avrily 2012
Eo amin'i India sy i Shina, 200.000.000 ny isan'ny zazavavy “manjavona” noho ny fanalan-jazarano vavy na noho ny fandaozana sy famonoana kilongavavy. Maro ny lahatsarim-panadihadiana na vaovao mitatitra ity tranga ity, miezaka ny hanazava ny anton'ny fanavakavahana ara-pananahana ity ary mitady ny zavatra azo atao momba azy ity. Amin'ny “Voambolana telo...